SERASERA, TENY MALAGASY: 16/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 16/02/11
16 Février 2011, 22:02pm
Fandaminana ny krizy Ho avy i Dada …
Nihazakazaka ny fielin’ity vaovao ity omaly, na efa tamin’ny sabotsy 12 febroary 2011 nandritra ny Asaramanitry ny Tiako I Madagasikara ao amin’ny Boriborintany faha-3 tao Ampandrana no re na tsy nivantana aza ny filazana fa ho avy Ramose.
Omaly anefa dia henika ity vaovao ity ny Internet sy ny Facebook ary ny sms. Ireo olona manodidina akaiky an’i Marc Ravalomanana rahateo dia samy manamafy io vaovao io. “Nifampiresaka an-tariby tamiko izy ny alatsinainy hariva ary nanamafy fa ho avy”, hoy i Fetison Rakoto Andrianirina, lehiben’ny delegasiona Ravalomanana teo aloha ary ankehitriny dia mitarika ny Komity Firaisankina amin’ireo iharan’ny tsindry hazo lena.
Nanamafy koa ny mpitondra tenin’ny ankolafy Ravalomanana, Guy Rivo Randrianarison, fa “ho avy izy”. Nisy rahateo moa ny fanambarana nivoaka omaly 15 febroary 2011, nataon’ny filoha Marc Ravalomanana, milaza fa “hiverina ary hitodi-doha aty an-tanindrazana aho amin’ity herinandro ity. Matokia ianareo fa hijoro sy hiray hina isika ho an’ny Malagasy tsy ankanavaka. Koa mitrakà ary mijoroa fa tsy havelantsika ho lavo ny tanindrazantsika”. Ny mpisolovava azy, Me Hanitra Razafimanantsoa, nanampy fa “efa milamina ny any (Afrika Atsimo) raha … (Suivre le lien)
Hiverina ny Dr Simao Hodinihina ireo tolo-kevitra hafa
Ho avy eto Madagasikara amin’ity anio ity, raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany, ny iraky ny SADC tarihin’ny Dr Leonardo Simao hanelanelanana amin’ny famahana ny krizy mitarazoka efa 23 volana izao.
Mandeha ny resaka, saingy tsy voamarina hatreto, fa ho avy ihany koa i Joaquim Chissano, filoha mozambikana teo aloha sady lehiben’ny mpanelanelana iraisam-pirenena amin’ny fandaminana ny krizy eto Madagasikara. Hiara-dia ireto diplaomaty iraisam-pirenena ireto sa hifanao andiany ? Ny azo antoka izany dia manohy ny asa fanelanelanana ny avy amin’ny SADC. Efa nisy ny sori-dalana nivoaka ary nozaraina tamin’ny ankolafin-kery politika isanisany nialoha ny nandaozan’ny Dr Leonardo Simao an’i
Madagasikara ny alakamisy 03 febroary, noho ny antony ara-pianakaviana tamin’ny nahafatesan’ny rainy. Niteraka resabe izy iny, na fantatra aza fa sori-dalana lasitra ihany, hanamora ny … (Suivre le lien)
Rabe Landry “Misy fetra ny fandeferana fa hitroatra ny vahoaka”
“Atahorana ny fitroaran’ny vahoaka mahantra noho ny zava-misy ankehitriny», hoy Atoa Rabe Landry, mpahay toekarena sady mpandraharaha. Aoka tsy hieritreritra ny mpitondra ankehitriny, hoy ity farany, fa tsy hoe resy ny vahoaka tsy mandady harona rehefa tsy miteny.
Misy fetrany ny fandeferana ka rehefa mitroatra eo izy dia tsy mila mpitarika izany fa hanapotika tanteraka. Ary raha sanatria tonga eo izany dia tsy tana intsony fa ho mafimafy noho izay niseho rehetra hatramin’ny 1971, 1975, 1980, 1981, 2001 ary ny 2009. Ny manarina azy no tena olana be avy eo. «Ilay maha izy azy antsika no very», hoy ity mpahay toekarena ity, tsy misy fifandaminana mitranga fa fankahalana olona no betsaka eto. Taloha nisy ny … (Suivre le lien)
LAURENT RAMAROSON (AVI): « Ao anaty fitondrana ny mpamingana »
Tsy tongatonga ho azy ireo karazana krizy eto amintsika, manomboka any amin’ny politika ka hatrany amin’ny vidim-piainana. Raha ny fahalalana azy, amin’ireo manohana ny fitondrana ihany ny sasany iavian’ny fahasarotan-draharaha toy ny fiakaran’ny vidim-bary, ohatra. Toa manamafy izany ny resaka nifanaovana tamin’ny Ct Ramaroson Laurent (Avi), raha tafaresaka taminay. « Misy mamingampingana ao amin’ny samy mpitondra ao », hoy izy. Midika ve izany fa anisan’ireny ny nanesorana minisitra na tompon’andraikitra hafa ? Heverina fa mbola hitohy ny fanesorana na fandroahana, eo am-piandrasana ny fananganana ilay governemanta iombonan’ny vondron-kery politika rehetra. Amin’ny Avi, « ny fanaovana ny fifidianana haingana ihany no tena vahaolana », hoy Ramaroson Laurent. Raha vantanina, tsy dia mazoto amin’ny … (Suivre le lien)
Exopoles: « Aoka izay ny ady seza… »
Nanatanteraka fifanakalozan-kevitra tetsy amin’ny Espace Mon Goûter Andrefan’Ambohijanahary, izay nanasan’izy ireo ny herivelona rehetra sy ny sendika tsy ankanavaka eto Madagasikara manoloana ny fitadiavana vahaolana amin’ny famahana ny krizy misy eto amin’ny firenena ireo vondron-kery eo anivon’ny Exopoles, omaly. Nitarika izany fihaonana izany ny filohany Cyril Rasambozafy.
Notsipihan’i Pascal Raboniarisoa mpikambana ao amin’ny birao nasionaly Exopoles nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety omaly fa marobe tamin’ireo sendika izay naniry ny hihaona tamin’ny dokotera Simao no tsy voaray ka izany no … (Suivre le lien)
Diniho kely ity: Laharam-pahamehana samy hafa...
Vita ny alatsinainy lasa teo ny famindram-pahefana teo amin’ny ministry ny Asam-panjakana teo aloha sy ny « vaovao » misolo toerana vonjimaika azy.
Hatramin’izao aloha dia tena mbola tsy mazava amin’ny mpanaraka ny raharaham-pirenena ny antony nanesorana an’io ministra teo aloha io. Honohono sarotra hamarinina no re koa dia aleo mangina sao hiteniteny foana.
Na izany aza anefa dia nanaitra ny maro ihany, indrindra fa ny mpiasam-panjakana ny nandre ny voalazan’ny ministra mpisolo toerana ho laharam- pahamehana ho an’io departemanta vao noraisiny io.
Ny nisarika ny saina voalohany dia ilay hoe hoitarina hatrany amin’ny faha-62 taonany ny fotoana hiasan’ny mpiasam-panjakana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mba nifampierana tamin’ny mpiasa ve izany ê? Raha ny fahitana ny fihetsik’ireto farany mantsy dia ny fandehanana misotro ronono alohan’ny faha-60 taonany aza no maha may azy ireo. Mazava loatra ny anton’izany, dia satria aleon’izy ireo mandray mialoha ny … (Suivre le lien)
Fandalina / An-dohalika ny ranombary !
Ankoatra ny resaka fivoahana amin'ny krizy politika, dia anisan'ny manahirana sy mampisavorovoro tokoa ity resa-bary ity, ny fidangan'ny vidiny sy ny fiovaovany no tiana ho lazaina. Raha fintinina moa dia saika tafakatra 2000 Ar. mihitsy ny kilao teo aloha kely teo. "An-dohalika marina ny ranom-bary" ka voatery nandray fepetra haingana ny fitondrana HAT ary nanome baiko ny governemanta hampidina izany ao anatin'ny fotoana fohy. Dia nihetsika tokoa moa ny minisiteran'ny Varotra ka nahita tampoka vary avy any ivelany 250 taonina namidy 1000 Ar. ny kilao ho an'ireo fokontany miisa 192 eto an-drenivohitra ! Amin'izao fotoana izao dia misy varim-panjakana nafarana avy any ivelany tsy mitovy vidy eto an-drenivohitra dia ny 500Ar ny kilao hoa an'ireo mahantra eny amin'ny "Tsena mora" ; ny 1180 Ar/kg antsoina hoe vary mora ary ity farany izay 1000 Ar/kg. Ny eny amin'ireo mpivarotra vary gasy moa dia toa izay tian'izy ireo ivarotana ny azy… (Suivre le lien)
Fampodiana an’Ing Ravalomanana: “Tsy maintsy handray andraikitra ny fanjakana”, hoy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny
Samy manana ny andraisany ilay fanambaran’ny ankolafy telo nilaza ny fiverenan’Ing Marc Ravalomanana eto Madagasikara, amin’ny asabotsy ho avy izao ny sokajin’olona samihafa.
Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny raha nametrahana fanontaniana mikasika izany dia nilaza fa “tsy maintsy handray andraikitra ny fanjakana raha toa ka misy korontana”. Efa madiva mantsy ny famahana krizy, hoy ny “Vice Amiral d’Escadre” Ramaroson Rarison Hyppolite, raha nahita ny fahatongavan’ny iraky ny OIF mijery akaiky ny fanomanana fifidianana, ny solontenan’ny Filoha Kômôriana, ny hahatongavan’ny Minisitra Frantsay misahana ny fiaraha-miasa eto amintsika ary ny fiverenan’ny Sadc eto hiresaka manodidina ilay sori-dalan’ny dokotera léonardo Simao ka tsy tokony hokorontanina intsony. “Averimberina foana izany fiverenan’Ing Ravalomanana izany ka aleo izy ho avy ary tokony hamaly araka ny … (Suivre le lien)
Vidim-piainana: Mainka miakatra ihany ny vidin-tsiramamy
Raha fidinan'ny vidin-tsiramamy no andrasana sy tokony hitranga dia ny mifanohitra amin'izany no mitranga eny an-tsena.
Mainka miakatra ihany ny vidin-tsiramamy. Mbola niakatra teo amin'ny roanjato ariary teo ny elanelam-bidin'ny kilaon'ny siramamy raha ny hita teny amin'ny tsena sasany sy ny mpivarotra mpaninjara teto Andrenivohitra omaly. Misy 3400 ariary ny kilao raha mbola 3200 ariary ny herinandro teo. Tsy fantatra kosa na vao niakatra indray ny vidin'ny siramamy any amin'ireo mpamongady na ny tahirin'ny mpivarotra efa teo aloha ihany io saingy izao vao namidy. Vao omaly no omaly nilaza ny amin'ny hampidinana ny vidin'ny siramamy ny mpitondra ankehitriny dia toa mamaly izany sahady(na manohitra izany) ny zavamisy hita. Raha fidinan'ny vidin-tsiramamy no andrasana sy tokony hitranga dia ny mifanohitra amin'izany no mitranga eny an-tsena … (Suivre le lien)